Resipeo hen'omby «Homemade & Mahafinaritra} - Fomba Fanamboarana
ohatrinona ny vidin'ny lasagna
mandany miaraka amin'ny lasopy laisoa goavam-be
sombin-mofo panko hividianana
mahandro miadana salisbury steak mandany amin'ny denaria
izany Resipeo henan'omby mety tsara amin'ny toetrandro mangatsiaka kokoa! Ny henan'omby malemy dia afangaro amin'ny ron-kena miaraka amin'ny ovy, tongolo, seleria, pitipoà ary karaoty mandra-pitsonika ao am-bavanao. Sakafo fampiononana any an-danitra!
Manompo ambin'omby aho Horonana sakafo hariva 30 minitra na Biskoitra dibera vita an-trano mba hakana gravy any ambanin'ny vilia!
Ny henan'omby dia zava-pisakafoanana mahazatra ao amin'ny tokantrano maro erak'izao tontolo izao. Misy fanamboarana lasopy sy lasopy amin'ny nahandro hena toy ny tiako indrindra Soup mora Hamburger ary ny fiovan'ny kolontsaina toa Goulash hongroà , fa ity fomba fahandro henan'omby mahazatra ity no tiako indrindra!
Ahoana no fanamboarana henan'omby
Ny fitadiavana ireo sombin'omby alohan'ny hanampianao ny tahiry dia misy fiovana lehibe amin'ny tsiro azonao avy amin'ny lasopy. Tena io ihany no mety anananao hahazoana an'io karamelà matsiro amin'ny hena io!
Rehefa mipetaka ny legioma sy ny ron-kena, dia ho tsikaritrao fa mihamafy ny tsiro ao anaty masaka. Mahandro haingana ny pitipoà ka ampiako ao anatin'ny minitra vitsy farany!
Ity fomba fahandro ity koa no fomba tsara indrindra hampiasana ny legioma mety ilainao ampiasaina. Raha manana ambiny ianao ovy natsatsika , karaoty glazed na holatra nendasina , tetehina fotsiny ary atsipazo ao izy ireo!
Ahoana no hanotoako henan'omby
Ny henan'omby dia hihombo kely voajanahary noho ny mosary ao anaty ovy sy ny fanala ny hen'omby, fa tiako kosa ny manamafy kely kokoa azy io.
Ny ahitra dia azo nohamafisina amin'ny fanomezana masaka haingana ny legioma na azonao ampiasaina amin'ny lafarinina na katsaka. Ny fomba tiako indrindra amin'ny fikolokoloana henan'omby (sy ny fomba ampiasaina amin'ity sakafom-bary henan'omby ity) dia ny fampiasana slurry vita amin'ny katsaka.
Ahoana ny fomba fanaovana slurry
Mora ny manao slurry! Atambaro ny faritra mitovy amin'ny katsaka sy ny rano ary atsofohy. Nolazaiko taminao fa mora izany !!
Araraka kely ity fangaro ity ao anaty lasopy na laoka mandroboka mandra-pahatonganao ao anaty fitadiavana tadiavina. Raha vao matevina ny masaka anao dia avelao handrahoina 1-2 minitra farafaharatsiny mba hahazoana antoka fa mahandro tsiro starchy ianao.
Raha avela hipetraka alohan'ny hanampiana lasopy na lasopy, dia hipetraka ao anaty minitra roa ny slurry, ka alao antoka fa hanome azy io alohan'ny hanampiana azy. Indraindray aho mampifangaro ny vovo-katsaka amin'ny ron-kena ambany sodium (na tsy misy sodium) fa tsy rano.
Azonao atao ve ny mangatsiaka ny henan'omby?
Eny, azonao atao ny manala ny laon'omby! Tiako hampangatsiaka azy ao anaty kitapo ho an'ny vata fampangatsiahana amin'ny anjara-hanompo tokana mba hahafahako mamoaka ampahany iray amin'ny sakafo atoandro (na efatra amin'ny sakafo hariva)! Defrost mandritra ny alina ao anaty vata fampangatsiahana na azonao atao ny mihintsy ao anaty microwave (miovaova ny fotoana arakaraka ny haben'ny ampahany) mampihetsi-po indraindray.
ny fomba fanaovana sundae mizarazara akondro
Inona no hotompoina amin'ny henan'omby
Ny henan'omby dia tena tonga lafatra amin'ny azy manokana, sakafo feno izany!
Matetika izahay dia manolotra azy amin'ny mofo, biscuit na koa Rolls Crescent Garlic manototra ny brothre rehetra! Tiako koa ny manompo azy miaraka ovy nopotsehina ao ambanin'ny vilia! Na ny crackers na ny sira aza dia izay ilainao ihany.
Lasopy manafana ny kibo bebe kokoa tianao
Soup mora Hamburger - Mpamaky ankafizin'ny mpamaky!
Soup Minestrone - Italiana mahazatra!
Resy lasopy tsaramaso Pasta
Lasopy sakamalaho voaroba - Mora sy matsiro!
Resipeo zanak'omby Bourguignon
Resipeo mora henan'omby
Fotoana fanomananaroa-polo amby minitra Fotoana fandrahoan-tsakafoiray ora 10 minitra Fotoana manontoloiray ora 30 minitra Fanompoana8 servings MpanoratraHolly Nilsson Ity fomba fandrahoana henan'omby mora ity dia ankafizin'ny fianakaviana. Ny legioma malemy sy ny hen'omby ao anaty ron-kena volontsôkôla manankarena! pirinty Pin
▢rOA kilao nandrahoina hen'omby voaravaka sy cubed
▢3 tablespoons koba tsara toto
▢½ sotrokely sira
▢½ sotrokely dipoavatra mainty
▢3 tablespoons menaka oliva
▢iray tongolo voatetika
▢6 kaopy ron-kena
▢½ kapoaka divay mena tsy voatery
▢iray farantsanao ovy voahitsakitsaka sy cubed
▢4 karaoty tapaho ho 1 santimetatra
▢4 bary seleria tapaho ho 1 santimetatra
▢3 tablespoons paty voatabia
▢iray sotrokely rosemary maina na sprig vaovao 1
▢rOA tablespoons vovoka katsaka
▢rOA tablespoons rano
▢¾ kapoaka pitipoà
Atambaro ny lafarinina, ny vovoka tongolo lay ary ny sira sy poivre. Atsipazo amin'ny fangaro lafarinina ny hen'omby.
Afanaina ao anaty lafaoro na vilany lehibe iray ny menaka oliva. Andrahoy ny hen'omby sy tongolo mandra-paha-volontany.
Manampia ron-kena sy divay mena rehefa manaisotra ny sombin-volontany ao anaty lapoaly.
Arotsaho ny akora sisa tavela afa-tsy ny pitipoà, vovo-katsaka ary rano. Ahenao ny hafanana ho ambany somary ambany, sarony ary atsimohy mandritra ny adiny 1 na mandra-pahalemen'ny hen'omby (hatramin'ny 90 minitra).
Afangaroy ny vongan-katsaka sy rano mitovy mba hamoronana slurry iray. Ampio tsimoramora ilay slurry amin'ny lafaoro mangotraka hahatratra ny tsy fitoviana tadiavina (mety tsy mila ny slurry rehetra ianao).
Atsofohy amin'ny pitipoà ary atsimohy 5-10 minitra alohan'ny hanompoana. Manaova sira sy dipoavatra mba hanandrana.
Ny hena henan'omby dia matetika vita amin'ny faran'ny henan'omby isan-karazany. Raha tsy mihamalemy ny hen'omby aorian'ny 60 minitra, manarona ary avela hilona 15-20 minitra fanampiny na mandra-pahalemem-panahy.
Kaloria:444,Karbohidraty:22h,Proteinina:25h,Tavy:28h,Tavy mahavoky:9h,Cholesterol:80levitra,Sodium:383levitra,Potasioma:1105levitra,Fibre:4h,Sugar:4h,Vitamina A:5755IU,Vitamina C:27.1levitra,Kalsioma:73levitra,Vy:5.5levitra
Teny lakilenahandro henan'omby, nahandro henan'omby, nahandro nahandro henan'omby mora, namboarina nahandro henan'omby Mazava ho azyBeef, Sakafo hariva, Entree, Main course, Soup masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady mba jereo eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
York Minis Ice Cream Cupcakes miaraka amin'ny saosy Peppermint Pattie Fudge!
Sandwiches Pancetta, Arugula ary Gruyere!
Cupcakes voninkazo mamy lohataona Marshmallow!
Akoho voa Poppy
Muffins Gingerbread miaraka amina tendron'ny crises spice
Kitiho ny resipeo Cat Cracker Barrel Hashbrown Casserole
Fandroahana akoho buffalo tsara indrindra
Sopan'omby sy makaroni
Ahoana ny fomba fahandro ny asparagus (etona, grill, fanaovan-mofo, fanendasana amin'ny rivotra)